Hwiza Hwemitambo, Nhandare Yemitambo, Sod Huswa Mat - Wanhe
Wanhe Grass inyanzvi yepamhepo yeInternet brand inosanganisa R&D, kugadzirwa nekutengesa uye yakazvipira kuve yakanakisa mhando yebasa rekupa uye kugadzira mumunda wehuswa hwekugadzira. Huai'an Wanhe Indasitiri uye Trade Co., Ltd.iri iri kuBhangi reBeijing-Hangzhou Grand Canal ine nzvimbo dzinoyevedza. Iri ndiro guta rekuZhou Enlai, murume akakura wechizvarwa, Guta reHuai'an, Dunhu reJiangsu. Xinchang Railway uye Beijing-Shanghai Expressway kupfuura nomuguta pamwe nyore chokufambisa. Huru zvigadzirwa ndevemitambo huswa uye nzvimbo huswa uye zvimwe zvigadzirwa nefekitori yedu. Isu takasimbisa hurefu uye hwakagadzikana kudyidzana hukama nevatengesi vazhinji nevamiririri mukati memakore makumi maviri apfuura Kutengesa kunze kwakave zvinopfuura makumi masere muzana ezero rekutengesa.
Wanhe Grass nzvimbo yegorofu yakagadzirirwa uye kugadzirwa zvinoenderana nekuisa chaiko ruzivo rwegirini, ichipa zvisingaenzaniswi chaihwo maererano nechitarisiko chepasi uye mashandiro. Kutsetseka kwayo kwakaringana kunovimbisa chaiyo bhora roll uye kunopa inofadza nyaradzo uchitamba pairi.
Chiitiko cha Wanhe Grass kugadzira turf yekunyepedzera yemitambo yakati wandei inotibvumidza kupa zvigadzirwa zvepamusoro-soro zvekushandisa zvine chinangwa, senge 11-a-padivi uye 7-a-parutivi nhabvu nhandare, nhabvu uye hockey munda uye nhabvu uye rugby munda .
Unoziva here vatengi vanowedzera kutenga huswa hwekugadzira kubva kuChain Stores kana zvitoro zveDI? Icho chitsva chinotengesa-kutengesa chigadzirwa chevanhu ku DIY. Wanhe Grass Landscape yapinda mune anozivikanwa Chain zvitoro uye izere neruzivo rwekupa kune cheni zvitoro zvine dzakasiyana sarudzo: roll 2X25m, roll 1x4m, mat 1X1m, pad 30X30cm.
Ndinoshanda na Wanhe kwemakore mashanu nehuswa. Huswa chaihwo! Ini ndinoshandisa iyo kune angu mapurojekiti mapurojekiti uye ndinowana yakanaka mhinduro kubva kumagumo mushandisi, uye ndinowana rakakura bhizinesi uye kubudirira. Kutenda Wanhe Grass Chikwata Ini ndinokurudzira ichi chigadzirwa!
Kana iwe uri kufunga nezvekutengera izvi kwauri, haunganyadziswe. Iyo ine huswa chaihwo inonzwa iyo izere uswa uye ichishandisa yakareba.Ichi chigadzirwa chakakura chemutengo mukuru uye chinoshanda nemazvo!
Yakasimba kwazvo uye yakagadzirwa zvakanaka. Ane mbiri dzakasiyana dzakasiyana dzekurova kuti uwedzere kuchokwadi. Mhando yepamusoro! Mugadziri akanaka! Hapana nyaya nechigadzirwa zvachose. Izvi ndizvo chaizvo zvandaitsvaga. Saizi yakakwana yezvikwata zvangu zvese.
Super yakakurudzirwa mugadziri! Kurumidza kuendesa. Chigadzirwa mhando yakanaka, huswa hwakapfava uye chaihwo. Pasuru zvinhu zvakare zvakanaka kwazvo. Ivo vane yepamusoro mhando uye kugona kwechigadzirwa kwakatemerwa isu nekuti isu tinoziva kuti ivo vanogona alwasy kutipa mhinduro. Ravo rekutakura boka uye zvekutengesa zvine hunyanzvi. Yakurudzirwa.
Nyanzvi Yakagadzirwa Green Makapeti Huswa hwenzvimbo. Mutengesi aive nehunyanzvi uye nekukurumidza kupindura kumibvunzo. Iyo kambani seyakazara inoita kunge yakanyanya vatengi kushandira. Ndingakurudzira zvikuru kuita bhizinesi nemutengesi uyu zvakare mune ramangwana.
Yakanaka kwazvo chigadzirwa, uye ine hushamwari sevhisi, nyanzvi kambani. Kutenda Wanhe Grass, isu tichabatana pamwe munguva pfupi.
Astro Turf Nhandare Yemunda, Landscaping Grass Yenzvimbo Yenzvimbo, Bhora Turf Uswa, Tsvina Yakagadzirwa, Kutevedzera Grass Carpet, Chakagadzirwa Gorofu Grass,